Train Travel Nokurwisana Plane Travel - Ndezvipi Best? | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Train Travel Nokurwisana Plane Travel - Ndezvipi Best?
Kune akawanda modes pakufamba iripo nhasi chevatariri kumativi Europe, asi chitima kufamba maringe ndege pakufamba ndiye anofadza kupfuura imwe.
zvisinei, iyo nzira yokufambisa zvakanaka? pa Save A Train, tiri Chokwadi norusaruro uye vanofunga kuti chitima kufamba ari nokure vane mhando chokufambisa! Verenga pane pazasi kuti uone kuti chii chiri nani uye ngatibvei mumota yedu pakufamba kwechitima maringe nendege.
Air travel is now recognized as the fastest-growing contributor to global warming. Kudzivisa ndege kana paine nyore inotsiva kufamba zvinogona chikuru chimwe chinhu kuti munhu anogona kuita kuti kucheka zvavo kabhoni chavangayeukwa. Kusvibiswa Air ipfupi zvinoshamisa nokutanga chitima pamusoro ndege. Munyika dzakawanda dzokuEurope, chitima network vane zvakawanda uye mabasa kakawanda, saka unogona kuva vaifamba eco ushamwari asina chibayiro.
Foggia kuna Bari Zvitima
Florence kuna Bari Zvitima
Naples kuna Bari Zvitima
Rome kuna Bari Zvitima
Vatariri nendege yemanyorero zvinoreva unofanira kuwana kwenyu chigaro Mavhiki, kana kunyange mwedzi, pachine kuti munhu anonzwisisa yokufamba.
Kamwe iwe yakasimbiswa chigaro chako, hazvisi nyore kuchinja Flights dzenyu vasina kubhadhara guru muripo.
Kunyange vamwe zvitima dzinoda iwe kuti chigaro Reservations pachine, pane zvakawanda mukana wokushandiswa, kunyanya kana unofanira kuchinja nguva yauri kuda.
Zvino Save A Train kunyange kana wako tikiti kuti mutengo madonhwe, vachava muzive uye kukubatsira kutsinhanisa tikiti rako panguva isingadhuri mutengo!
fungidzira achitora rwendo uye vasina kusvika maawa maviri mangwanani, vamirire refu vakachengeteka mutsetse, chiyero kubuda mvura yako uye gels, kana kutora shangu dzako rokuongorora. Welcome kuti nyika chitima kufamba. Kana iwe kufamba nendege, zvimwe nguva uye matanho okuzvidzivirira zvinodiwa. Vatariri rails yemanyorero zvinoreva unogona svika 30 maminitsi mberi nguva uye ufambe ngaatarire kuna pachikuva wako pasina dzichikunetsa uye hapana chikonzero wotarisa masutukezi dzenyu, so here we presented you with another great point of train travel versus plane travel, apo chitima kufamba akahwina!
Dzidzisai kufamba maringe Plane pakufamba, Speed ​​- nokukurumidza nemasuo
Air kufamba anozivikanwa kuti mumwe uchitsanya nzira kusvika kwauri kuenda, zvisinei, izvi chete kutora ndege pacharo nezvezvinhu. How kure mberi kutiza kwenyu here kuti usvike kuyambuka refu Check-uye vakachengeteka mutsetse? Kana iwe watarisa muhomwe unofanira kumirira kuti utore izvi paunosvika - ino inotora nguva. Kusiyana dzendege, panguva chitima dzemapurisa hapana cheki-dzi kana kuchengeteka mitsetse, saka haufaniri kuva pachiteshi maawa pamberi penyu rwendo. Most zvikuru chitima dzemapurisa dziri kurudyi mumwoyo mumaguta dzavanogara. Mostly kana iwe utore chitima, wasvikako zvakananga panguva yenyu kuenda. zvisinei, nokutora ndege, unogona kupedza maawa kusvika uye kubva yendege.
Mumakore gumi adarika, chitima kufamba yava kuramba rikwezve budget-conscious travelers. Kunyange achitora ndege kuti kwauri kuenda ichiri nzira inobudirira kusvika kwauri kuenda, pane mamwe mari kuti isu yemanyorero hanya kufunga. Pamunenge muchikurukura kwadzinoita kwako chokufambisa, unofanira kuwedzera mune dzimwe mutengo wokusvika uye kubva yendege. Izvi kana inosanganisira mari mafuta uye kupaka, kana yendege bhazi kana tekisi yokufamba. Hapana chiri zvakachipa.
Munich kuna Potsdam Zvitima
Hamburg kuna Potsdam Zvitima
Hanover kuna Potsdam Zvitima
MuFrankfurt kuna Potsdam Zvitima
Kutoti iwe mari yebhizimisi kirasi, nzvimbo yako Kazhinji kukunyimai pamusoro ndege chigaro. On chitima, unogona kufamba akasununguka, uye uchava nezvakawanda legroom kumativi zvigaro zvenyu. Panguva kutiza kwenyu, unofanira kumirira chigaro bhandi chiratidzo kudzima kutama chigaro chako. zvisinei, muchitima watama pasi mberi nokudzoka shure, ichitora nokuruma kana kofi, uye kutarisa nyika ichipfuura. A yevedza chitima tasva kunogona kuva zororo. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all Airlines.
Dzidzisai kufamba inokupai waizoenda vakasununguka wako akanamata dzinovaraidza. vazhinji dzinovaraidza havasi wakanyatsokodzera nendege nokuda utano, zera, kana kubereka.
vakatakurwa pamusoro European nezvitima anogona kutora imbwa, katsi, nezvimwe mhuka diki navo uye yakawanda yenguva pasina imwezve mari!
Kutora zvose izvi zvinokonzera nezvezvinhu, zviri nyore kuona kuti chitima kufamba kuri kuramba koshesa nhasi. Planes vari yakakunakira kuti imi kunyika nemakiromita. zvisinei, if you are traveling around Europe or other areas with excellent rail transportation, chitima kufamba ndiye rikurumidze uye vakasununguka kwadzinoita zvifambiso.
Saka zvino kuti isu akapedzisa Kumukundi ari muchitima kufamba maringe ndege pakufamba, Kuti tiwane yakanakisisa chitima fares mu Europe, kushanya Save A Train.
Kuti uwane mamwe mashoko, Follow Save A Train on Facebook, Instagram Account, uye Twitter Accounts.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / nl kana / nayo uye mimwe mitauro.
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Rovedza Kufamba Matipi, Rovedza Kufamba Turkey, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
5 Zvikonzero Nei Usingafaniri Kuita Vimba On Train Ticket Mugshot Websites
Business Travel nechitima, Rovedza Kufamba Matipi